नयाँ वर्षको स्वागत सलहेस फूलबारी
 सन्तोष सुवेदी
सगरमाथा अञ्चलको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र लहानदेखि पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको चार किलोमिटर पश्चिममा पर्छ– फूलबारी चोक । पहिले भोटियाटोल भनेर चिनिने उक्त चोकदेखि करिब आधा किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि नौ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरानो तथा रमणीय वन भेटिन्छ । सयौँ वर्ष पुराना रूखहरू भेटिने उक्त वन नै हो लोकनायक सलहेसको फूलबारी । जहाँको दुईवटा रूखमा प्रत्येक वर्षको पहिलो दिन नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तम्तयार भएर देखापर्ने गर्छ– माला आकारका सलहेस फूल ।
वनविहारका लागि प्रेमिका मालिनीसँग भेट्न आउँदा मालिनीले राजा सलहेसलाई स्वागतका निम्ति फूलको माला लगाइदिने गर्थिन् । सलहेस र मालिनीबीचको प्रेम यति प्रगाढ थियो कि प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गते मालिनीको मन्दिर (गहबर) छेउको रूखमा फुल्ने फूलका माला उनीहरूकै प्रेमको प्रतीक हो भन्ने जनविश्वास छ । फूलबारीमा अनेकौँ रूख भए पनि माला आकारको फूल मालिनीको गहबरछेउमा एउटै जराबाट निस्केका दुईवटा रूखमा मात्र फुल्ने गरेको छ । माला आकारको फूल फुल्ने रूखमुनि रहेको मन्दिर (गहबर) भित्र हात्तीमा चढेका सलहेस र उनकी प्रेमिका दिना मालिनीको मूर्ति छ । मन्दिरको पछाडि कहिल्यै नसुक्ने दलदले धाप खोलो पनि छ ।
मालिनीको गहबर छेउको एउटै जराबाट निस्केका दुईवटा रूखमा देखिने माला आकारको फूलका रूपमा सलहेस र मालिनी प्रत्येक वैशाख १ गते स्वयम् प्रकट हुने गरेको लोकविश्वास गरिन्छ । ती माला आकारका फूल हेर्न सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही तथा भारतका निकटवर्ती गाउँबाट आएका सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
यस वर्ष पनि वैशाख १ गते लाग्ने मेलाका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । फूलबारीस्थित मालिनी मन्दिरका पुजारी जितेन्द्र धामीले भन्नुभयो, ‘विसं १३२५ ताका प्रतापी राजा सलहेसको सौर्य र प्रेमसँग गाँसिएका गाथाको सम्झनास्वरूप यहाँका बासिन्दाले यस दिन परम्परागत मेला आयोजना गर्दै आइरहेका छन् ।’
पराक्रमी राजा सलहेसको गाथासँग जोडिएको हुनाले सलहेस फूलबारीसँगै सिरहा सदरमुकामस्थित महिसोथागढ, लहान नगरपालिका–१८ स्थित पकडियागढ, २० नम्बर वडास्थित ब्राह्मण गोर्छारी, २४ नम्बर वडास्थित मानिक दह र लक्ष्मीपुर–पतारी गाउँपालिकास्थित पतारी पोखरीमा सँगसँगै मेला आयोजना हुने गरेको छ । ती स्थानमा राजा सलहेसलगायत उनको गाथासँग जोडिएका पात्रहरूको हात्तीमा सवार मूर्ति देख्न पाइन्छ ।
मेलामा कतिपयले आफ्नो मनोकामना पूरा गराउन अनेक किसिमका भाकलसमेत पुकार्ने गरेको पाइन्छ । निसन्तान सन्तान प्राप्तिका लागि, दीर्घरोगी सुस्वास्थ्य र मनोकामना पूरा गर्न सलहेसको पूजा गर्छन् । भाकल पूरा भएपछि सलहेसलाई बोकापाठीको बलि दिने र कागजको छाता चढाउने परम्परा छ । यो फूलबारीमा सलहेसलाई साक्षी राखेर विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने जनविश्वास छ ।
मिथिलाको हावापानी, खेतखलो, गाउँघर, वन–जङ्गल सर्वत्र लोकप्रिय पात्र हुन्– राजा सहलेस । राजर्षी जनकपछि मिथिलामा प्रादुर्भाव भएको दोस्रो व्यक्तित्वका रूपमा सलहेसलाई मानिन्छ । चौधौंँ शताब्दीतिर मिथिलामा आफ्नो पराक्रम र चामत्कारिक नेतृत्वले गर्दा आजसम्म उनको चर्चा छ । महिसोथा, हालको सिरहा उनको जन्मस्थल हो । उनको वास्तविक नाम भने राजा जयवर्धन सैलेश रहेको थियो ।
इतिहास र संस्कृतिविद् डा. महादेव साह चाडबाड, संस्कृति र साँस्कृतिक महोत्सवमा दलित र गैरदलित भनेर विभाजनको रेखा हटाउने आन्दोलनको प्रादुर्भाव नै सलहेसले गरेको बताउनुहुन्छ । ‘राजा सलहेसले दलित समुदायभन्दा माथि उठेर आफ्नो बसोबास गर्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई बाहिरी आक्रमणबाट बचाए, यसबाट सबै समुदायलाई न्यायको प्रत्याभूति गराई पारम्परिक, पारस्परिक आधार बनाइदिएकाले उनी सबैका पुजनीय भएका हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सलहेस फूलबारीमा अन्तरजातीय विवाह पनि भइरहेकाले दलितमाथिको विभेद न्यूनीकरण भएको मान्न सकिन्छ ।’ विभेद अन्त्य गर्न राजा सलहेसको गाथासँग जोडिएको साँस्कृतिक चाडले बल पु¥याउने डा. साहको भनाइ छ ।
चौधौँ शताब्दीअघिको सलहेस गाथाको ऐतिहासिक कथामाथि अब चलचित्रसमेत निर्माण हुने भएको छ ।